NEWS Qodobada Looga Baahan Yahay Xasan Sheekh Inuu Wax Ka Bedelo Siyaasadii Farmaajo
Tuesday May 17, 2022 - 21:20:26 in Wararka by Mogadishu Times
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa habeen kahor loo doortay xilka madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo wareegii 3aad uu ka guuleystay madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo oo xafiiska fadhiyay Shantii sano ee la soo dhaafay.
Xasan Sheekh oo isu diyaarinaya inuu xilka la wareego ayaa maanta tegay madaxtooyada Soomaaliya oo ay ka socoto qaban qaabada munaasabada xil wareejinta, iyadoo uu kulan mudo kooban ahaa la qaatay madaxweynaha xukunka ka sii dagaya ee Farmaajo
Hadaba, maxaa looga baahan yahay Madaxweyne Xasan Sheekh inuu ka beddelo siyaasaddii Madaxweynihii hore Maxamed C/llaahi Farmaajo?
Dib u yagleelidda dowladda Soomaaliya ee ka soo billaabatay Carta sannadkii 2000, waxaa aas aas u ahaa: Dib u heshiisiin, Federaaleyn, dimoqraadiyeyn iyo dunida oo heshiis lala noqdo.
Shantii sano ee Farmaajo, waxaa lagu tuntay mabaabi’daa salka u ahaa dhismaha dowladda.
Waxaa awoodda dowladnimada gacanta ku dhigay koox aaminsan:
1- in Federaalka la baabi’iyo, si dalka uu gacanta ugu galo dowlad dhexe awood leh dadka oo dhan wada hoos tagaan. Waana dhaqankii sababay burburka dowladnimada Soomaaliya.
2- In la baabi’iyo nidaamka dimoqraadiga ee dastuurkeenna kmg ah uu ku dhisan yahay. Dastuurka waxuu qorayaa xuquuqda muwaadinka, xorriyadda shakhsiga ah, madaxbannaanida ra’yiga, xorriyadda kulamada, xisbiyada siyaasadeed, doorashooyinka iwm.
3- Ciidamaynta siyaasadda iyo siyaasadeynta ciidanka, waxay ahayd astaan kale oo shantii sano ee la soo dhaafay sii kordhaysay. Duullaankii Gedo, doorashooyinkii Baydhabo iyo Galmudug, afduubkii Baarlamaanka, waa calaamado tusinaya sida ciidanka loogu adeegsaday siyaasadda.
4- Xiriirka Arrimaha Dibadda waxaa gaaray dhaawac weyn, gaar ahaan waddamo muhiim u ahaa Soomaaliya sida Kenya, Sacuudiga, Masar, Imaaraadka iyo Jabuuti.
Haddaba, waxaa laga sugayaa Madaxweynaha cusub inuu si degdeg ah wax uga qabto arrimahaas.
Waxaa qoray :-Abdiaziz Golf Yare.